युगसम्बाद साप्ताहिक - राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा
Saturday, 04.04.2020, 11:58pm (GMT+5.5) Home Contact
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा
Monday, 08.27.2012, 04:45pm (GMT+5.5)
नेताको स्तर अनुसार नै राजनीतिक क्रियाकलापको पनि स्तर कायम हुँदोरहेछ । देशप्रति माया हुने नेता भएका मुलुकमा आन्तरिक रुपमा जति नै मतमतान्तर र विरोध भए पनि बाहिरी सम्बन्धमा आफ्नो देशलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै काम गर्दैनन् । तर हामी कहाँ भने एक पार्टीले अर्को पार्टीको र एक नेताले अर्को नेताको बद्ख्वाई गरेर सजिलै परचक्रीलाई सूचना दिन्छन् र आफू साख्खै हुन खोज्छन् । यसरी आफ्नै आन्द्रा–भुँडी खोलेर कसैको नजिक भएर स्वार्थ सिद्ध गर्दा देशकै स्वार्थमा आघात पु¥याएका अनेक उदाहरण यहाँ छन् । त्यस्तो निकृष्टताका दुष्परिणाम भोगिसक्दा पनि यहाँका ठुटे नेताका आँखा खुलेका छैनन् । राजनीतिक स्तरहीनताको यो स्पष्ट लक्षण हो ।
अरुलाई उपदेश दिने, अरुका मात्र दोष देख्ने, तर आफ्नो भ्रष्टचरित्र नहेर्ने यहाँकाा नेताको जातीय गुण नै भएको छ । भ्रष्टाचार निवारणको दायित्व बोकेका गृहमन्त्रीहरू नै यहाँ भ्रष्टाचारी ठहर भएर धमाधम डिल्लीबजार खोरमा पसिरहेका दृश्य जनताले देखिरहेका छन् । अरु मन्त्रीको स्थिति पनि त्यस्तै त्यस्तै छ । आफ्नो खोक्रोपन लुकाउन महात्माको अभिनय देखाउन खोजेर मात्रै भएन, आचरण पनि चोखो हुनुप¥यो । काम घटिया, तर आफूलाई माथिल्लो तहको देखाउन खोज्दा नेता र मन्त्रीका पोल खुलिरहेका छन् । यिनीहरूको यस्तै धुत्र्याइले गर्दा देश प्रतिदिन अधोगतिमा छ । जनता बुझ्ने भएका भए नेता र मन्त्रीले मनपरी गर्न पाउने थिएनन् । जनताको अज्ञानताको फाइदा उठाएर यी चटके (चमत्कारी)को ठगी धन्दा निर्वाध चलिरहेको छ । यो विडम्बना नै हो र जनता अशिक्षित र दुःखी–दरिद्री रहेसम्म यो धन्दा चलिनैरहने छ । त्यसैले यिनीहरू जनताको शैक्षिक–आर्थिक स्तर उठ्ने कुनै गतिलो काम गर्नै चाहँदैनन् ।
आज यहाँ मुर्ख र धूर्तहरूको राज छ । यिनीहरू चलाख छन्, तर चलाख हुनुको अर्थ ज्ञानी होइन । ज्ञानी भए त देशको यो दुर्गति नै हुने थिएन । बुद्धि भएकाहरू यहाँ जानाजान पाखा फालिन्छन् । हरेक पार्टीमा यस्तै छ । नेतृत्व विवेकशील र बुद्धिमान चाहिन्छ भन्नुको तात्पर्यले कुनै अर्थ पाएको छैन । यो दुर्भाग्य नै हो । प्रजातन्त्र भन्नाले जनताको राज भन्ने बुझ्नुपर्ने हो तर वर्षे च्याउ उम्रेजस्ता पार्टी र तिनका भुइफुट्टाहरूको जंगली राज यहाँ चलेको छ । अब त देशमा प्रजातन्त्र छ भन्न पनि लाज भैसक्यो । जनता झुक्याउन बेलाबेलामा यिनीहरू नारा पनि फेर्छन्, तर कुरा उही हुन्छ पुराने गा.पं.को नाम गाविस र जि.पं.को नाम जिविस राखे जस्तै । नयाँ प्रगति देखाउन प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भयो, राजमार्ग लोकमार्ग भयो, आरएनएसीबाट आर झिकियो, तर त्यो संस्था झन् डुब्यो । अब कुन दिन राजदूतलाई लोकदूत भनेर नयाँ प्रगति देखाउने हुन् ! राष्ट्रनिर्माताको शालिक फोरेर कुनै किम्वदन्तीका पात्रलाई ठड्याइयो । यस्तै यस्तै नकरा कामलाई यिनीहरू प्रगति र सुधार भनेर जनताका आँखामा छारो हालिरहेका छन् । यो स्वाङ र ढोंगको नक्कली कर्मकाण्ड नेताका दिमाखबाट नहटेसम्म सुधार असम्भव छ ।
यहाँको नेता चरित्र भनेको– ‘भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक’ भएको छ । अहिले एउटा कुरा एकछिनपछि अर्को कुरा र गर्ने बेलामा फेरि अझ अर्को कुरा गर्ने चरित्र नै नेताको विशेषता भएको छ । त्यस्ताले आफैं पत्रू भएको पनि बुझ्दैनन् । बन्दुक पड्काउन जान्दैमा बन्दुक विशेषज्ञ भइँदैन । विजुली बत्ती बाल्न र निभाउन जान्दैमा विद्युत विशेषज्ञ भइँदैन । त्यस्तै कुनै पार्टीको झण्डा बोकेको, टायर बालेको अथवा विस्फोट गराएर पुल भत्काएका भरमा सांसद वा मन्त्री हुँदैमा राजनीतिज्ञ होइदैन । त्यसका निम्ति त जनतामै भिजेको र देशको स्थिति बुझेको हुनुपर्छ । यहाँ शासनमा त्यस्तै अज्ञानीको संख्या बढेकाले विनाश मात्रै भएको छ ।
आफ्नो ज्ञानको स्तर नबुझ्नेहरूको नै बाहुल्य शासन सत्तामा हुने गरेका कारणले गर्दा प्रजातन्त्र आएको ६ दशक वितिसक्दा पनि नेता हुँ भन्नेहरूका क्रियाकलापमा कुनै सुधार भएको पाइँदैन । आजसम्म पनि व्यवस्थाकै बारेमा विवाद छ । देशमा कस्तो शासन व्यवस्था लागू गर्ने भन्नेसम्म पनि अझै ठेगान छैन । सबै पार्टीका आआफ्ना नारा छन्, तर ठोस कार्यक्रम छैन । नाम पनि कस्ता राख्छन् भने हिजोसम्म प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भन्थे, आज कतैका इशारामा बरालिएर ‘संघीय–जातीय–लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था वा गठबन्धन’ जस्ता शब्दजालको खेती गर्न थालेका छन् । यस्ता नानाथरि शब्दजाले तन्त्रबाट देश र जनताको कल्याण सम्भव छैन र आजको आवश्यकता पनि पूरा हुँदैन । यिनीहरू जे भन्दैछन् त्यसमा यिनको आफ्नै विश्वास छैन । यिनीहरू सत्ता र भत्ताका मात्र भोका हुन् भन्ने कुरा आजसम्मका क्रियाकलापबाट जनताले बुझिसकेका छन् ।
आजसम्मको स्थिति हेर्दा यो ठुटे नेताकेन्द्रित स्वार्थी राजनीतिबाट देश र जनताका निम्ति केही होला भन्ने आश मेटिइसकेको छ । बरु यो विकृत राजनीतिको महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । नेता त यहाँ छैनन् नै, भए पनि कुर्सीको तँछाडमछाड बाहिर छन् । नेताको मुकुण्डो भिरेकाले भने लाखे नाच देखाइरहेका छन् । नेता भए त जनताको विश्वास हुन्थ्यो त्यो नभएर नै हरेक कुरामा जनतालाई छल्दैछन् । संविधानसभाको म्याद बढाउन जनतालाई सोधेनन् । गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे पनि जनतामा जान डराएर आफूखुसी असंवैधानिक निर्णय गर्दै आए । त्यसैले पनि जनताबाट टाढा हुँदै गएका यिनीहरू जवर्जस्ती आफूखुसी शासन गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ । माओवादीको त घोषित रणनीतिक चाल नै भयो र असीमित स्वार्थवश तराई केन्द्रित नवोदित पार्टी पनि कतैको इशारामा त्यतै लागे, तर कांग्रेस–एमालेले होस् गुमाएको देखेर जनता आश्चर्य चकित छन् । यसै गरी पच्चीस वर्ष शासन गर्छौं भन्नुको अर्थ बुझिनसक्नु छ ।
फल अथवा फूल जति नै राम्रो भए पनि झरेपछि सड्छ, त्यसको सौन्दर्य–मूल्य रहँदैन । बाबुराम पनि आफ्नै गल्तीले आफ्नो ठाउँबाट झरिसके । नेताहरू यसरी नै विग्रदै गएका छन् । विश्वास हराउँदै गएको छ । विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्ने हो भने नेताकै चरित्रमा आमूल सुधार आवश्यक छ । यो यथार्थलाई नेताहरूले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । २०६२।०६३ को क्रान्ति भनिन्छ । वास्तवमा त्यो क्रान्ति नभएर विद्रोह थियो प्रतिशोधको । झाम्रे चुस्स दारी पालेका शुक्रे वेगार लागेजस्ता नेता महंगा सूट, औंलाभरी औंठी र सिक्रीमा सजिए, मोटाघाटा र रातापीरा भए । बस् त्यही हो परिवर्तन ।
अब जनताका पक्षमा चाहिं अराजकता, असुरक्षा, बेरोजगारी, महंगी मात्रै प¥यो । नेता सबै अरुकै गुलाम रहेछन् । कोही माक्र्सका र लेनिनका गुलाम, कोही माओका गुलाम, कोही गान्धीका गुलाम त कोही कसका गुलाम । अर्काको गुलामी किन ? नेपालको कल्याणको बाटो हामी आफैंले निर्धारण गर्न किन सक्दैनौं ? वास्तवमा आफ्नोपन नै नेताहरूले गुमाइसकेका छन् । अर्कैको भजन गाएर नेपाली जनतालाई ठगिरहेका छन् । त्यसैले अझै पनि इमान्दारी छ भने पुर्खाको पाइला पछ्याएर देशलाई अघि बढाउनु प¥यो । जनताले देखे भोगेको आजको यथार्थ यही हो । यथार्थ स्वीकार्ने हिम्मत छ भने नक्कली नेताको मुकुण्डो फालेर निस्कनु प¥यो ।